တွေ့မိသမျှ မြန်မာ Blogger အကြောင်း | AnZarTone
by AnZarTone တွေ့မိသမျှ မြန်မာ Blogger အကြောင်း
တွေ့မိသမျှ မြန်မာ Blogger အကြောင်း
Blog ဆိုတာ ဘာလဲ …?
Blog ဆိုတာ တစ်ကိုယ်တော် (မိမိတစ်ယောက်တည်း) ဖြစ်ဖြစ်၊ အုပ်စုတစ်ခု အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူ၊ သူတို့ရဲ့ သဘောတရား အယူအဆတွေ၊ ဗဟုသုတတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေ စတာတွေကို ပုံမှန်အနေနဲ့ ဝေငှကြတဲ့၊ မှတ်တမ်းတင်ကြတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က နေရာတစ်ခုကိုပဲ ဆိုလိုတာပါ။
Blog ဆိုတာ ……?
Blogger ဆိုတာ …?
Google ရဲ့ Blogger ဆိုက်မှာ Blog လုပ်ပြီး ရေးမှသာ Blogger လို့ ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ Blogger ဆိုတဲ့ သဘောတရားက အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့ Blog တွေမှာ ဝင်ရောက် ရေးသားနေကြသူများ အားလုံးကိုပဲ Blogger (ဘလော့ဂ် ရေးသားသူ) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
“a person who keeps and updatesablog.”
ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျားတို့မှာ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်လေးတွေ ရှိပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Blog မှာ တစ်ရက် တစ်ပုဒ်၊ တစ်ပတ် တစ်ပုဒ် ပို့စ်တွေကို တင်နေတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ဟာ Blogger တွေပါပဲ။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် စုပေါင်း ရေးသားနေကြတဲ့ Blog တစ်ခုမှာ မန်ဘာဝင်ထားတယ်၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာ ပို့စ်တွေ တင်တယ်ဆိုရင်လည်း Blogger ပါပဲ။
ဥပမာ အနေနဲ့ မန်းဂေဇက် (MandalayGazette) ဆိုတဲ့ မန်ဘာတွေ စုပေါင်း ရေးသားနေကြတဲ့ နေရာမှာလည်း မန်ဘာအဖြစ် ဝင်ပြီး ပို့စ်တွေ တင်တယ် (သတင်းဖြစ်ဖြစ်၊ နည်းပညာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)။ ဒါဆိုရင် ကျနော့်ကိုလည်း Blogger တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်တစ်ခု ထောင်ပြီး ရေးမှသာ ဘလော့ဂ်ဂါလို့ ပြောလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Blogger ဆိုတာ …..?
အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းဆိုရင် Blogger တွေဟာ နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိပါပြီ။
၁။ တစ်ကိုယ်တော် Blogger
၂။ အများပေါင်းစု Blogger
ဒီထက် ပိုပြီး ခွဲခြမ်းကြည့်မိတဲ့အခါမှာ အောက်ကအတိုင်း ထပ်ရလာပါတယ်။
၁။ နည်းပညာ Blogger
၂။ သတင်း Blogger
၃။ အနုပညာ Blogger
၄။ အားကစား Blogger
၅။ နိုင်ငံရေး Blogger
၆။ ဘာသာရေး Blogger
၇။ ကျန်းမာရေး Blogger
၈။ အထွေထွေ Blogger …. ဆိုပြီး တွေ့မိပါတယ်။
Blog အမျိုးအစားပေါင်း များစွာ
သူတို့က နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေမျှနေတဲ့ Blogger တွေပါပဲ။ ကွန်ပျူတာပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ၊ အင်တာနက်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ စတဲ့ နည်းပညာတွေကို သူတို့ တွေ့မိသလို၊ တတ်ထားသလို၊ နားလည်သလို အများသူငှာကိုလည်း ဝေမျှကြတယ်။ ပြီးတော့ ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံလို့ခေါ်တဲ့ တီထွင် ဆန်းသစ်မှုတွေကိုလည်း တင်ပြကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သတင်း Blogger သူတို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပြည်ပမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ စတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ပြကြတယ်။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ပြကြသူတွေပါပဲ။
သူတို့ကတော့ အနုပညာ ဆိုတဲ့အတိုင်း သီချင်းလည်း ပါမယ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာတွေလည်း ပါမယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ပါမယ်၊ ကဗျာ၊ စာ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု တွေလည်း ပါမယ်၊ စတာတွေအကြောင်းကို ရေးသားနေကြသူတွေပါပဲ။
သူတို့ကတော့ ဘောလုံးအကြောင်း၊ ဘတ်စကတ်ဘော အကြောင်း၊ ရေးကူးတာ၊ ပြေးတာ အကြောင်း တွေကို သတင်းအနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ လေ့ကျင့်ပုံ လေ့ကျင့်နည်း အနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တင်ပြနေကြသူတွေပါပဲ။
သူတို့က နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့အတိုင်း အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဝေဖန်ကြမယ်၊ ထောက်ပြကြမယ်၊ သရော်ကြမယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း တင်ပြကြမယ်။
သူတို့ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာ၊ မူစလင်ဘာသာ စတဲ့ ဘာသာတွေအကြောင်းကို မိမိတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာအလိုက် ဗဟုသုတ ရစေဖို့၊ သက်ဝင်ယုံကြည်လာဖို့ ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို တင်ပြကြတဲ့ သူတွေပါပဲ။
လူတစ်ယောက် ကျန်းမာ သန်စွမ်းအောင် ဘယ်လို နေရမယ်၊ ဘာတွေကို ရှောင်ရမယ်၊ ဘာတွေကို ဆောင်ရမယ်။ ဘာတွေကို စားသင့်တယ်၊ ဘာတွေကို ဝတ်ဆင်သင့်တယ်၊ ဘယ်ဆေးဝါးတွေကိုတော့ဖြင့် မှီဝဲသင့်တယ် စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို တင်ပြကြသလို၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်တွေကိုလည်း တင်ပြနေကြသူတွေပါပဲ။
၈။ အထွေထွေ Blogger
အထက်က ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကို ရောသမမွှေ ရေးသားကြသူတွေ၊ ဟာသ အကြောင်းအရာတွေ ရေးသူတွေ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားနေကြသူတွေ စတဲ့ စတဲ့ Blogger တွေပါပဲ။
အထက်ပါ Blogger အသီးသီးဟာ ကျနော် တွေ့မိသမျှ Blogger အမျိုးအစားတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ သူတို့ ကျင်လည်ရာ Blog (တစ်ကိုယ်ရေ၊ အများပေါင်းစု) အသီးသီးမှာ ရေးသားနေကြသူ Blogger တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ ဘလော့ဂ် (Wikipedia)
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Blog ရေးသားခြင်းကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်ခန့်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အစပထမ ရေးသားကြတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့် ပေါ်ပြီးနောက်မှာတော့ ညီလင်းဆက် က သူ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ထည့်သွင်းပြီးတော့ မြန်မာစာနဲ့ ဘလော့ဂ်ကို စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ မောင်လှ ကလည်း အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ နောက်ပိုင်းကစလို့ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေဟာ တစ်စတစ်စ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ပေါင်း သောင်းဂဏန်းဝန်းကျင်ထိ ရှိခဲ့ပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ (ခု ၂၀၁၂ မှာတော့ သိန်းကျော်နေလောက်ပြီလို့ ဆိုနိုင်မလားပဲ။)
၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွင်းမှာ အချို့သော မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါတွေ စုပေါင်းပြီး MBS (Myanmar Blogger Society) ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ သူတို့ရဲ့ အစည်းအဝေး၊ တွေ့ဆုံပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာပဲ ရွှေရောင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရကနေပြီးတော့ Blog အတော်များများကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါတွေ proxy ကျော်နည်းကို ကျွမ်းကျင်ခဲ့တာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ … :kwi: )
၂၀၀၇ ခုနှစ် MBS အစည်းအဝေး (သို့) တွေ့ဆုံပွဲကို ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခဲ့စဉ်က
မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ တွေထဲမှာ လက်တည့်စမ်းပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ Blog တွေလည်း ရှိသလို၊ တစ်စိုက်မတ်မတ် ရေးသား ဖော်ပြကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ လက်တည့်စမ်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ ဆိုသူတွေဟာ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို တစ်ပတ် တစ်ခါတောင်မှ Update ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ (Free Download Softwares) ဘလော့ဂ်တွေက များသလို၊ ရောသမမွှေ ဘလော့ဂ်တွေလည်း များပါတယ်။ မိမိအားသန်ရာ တစ်ခုခုကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး တည်ဆောက်ကြ၊ ပုံမှန် တင်ပြကြမယ်ဆိုရင် မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ လောကဟာ တိုးတက်လာဖို့ ရှိပါတယ် (ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သူက ပြောရတယ်ရှိသေး … :kwi: ) ။
Download … Download … Free Download …
နိုင်ငံရပ်ခြားက ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အကြောင်းကတော့ မသိတဲ့အတွက် ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံဆိုတာကို မပြောနိုင်ပါဘူး။ (ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ၊ မင်းက ငတုံး၊ ငကြောင်ကိုးကွ … :harr: )
မြန်မာ ဘလော့ဂ် အများစုမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို သုံးစွဲ ရေးသားကြပါတယ်။ ယူနီကုတ် (Myanmar 3) နဲ့ ရေးသားနေကြတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် MyanmarITPro, Forum.MMITD တို့ပါပဲ။ အချို့သော ဆိုက်တွေမှာတော့ Win Innwa နဲ့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှားရှားပါးပါးပါပဲ။
Zawgyi နဲ့ Unicode
ကျနော်တို့ဆီမှာ Blog တစ်ခု ရေးသားကြတော့မယ်ဆိုရင် Google ရဲ့ Blogspot (Blogger) နဲ့ ရေးသားကြတာ များပါတယ်။ name.blogspot.com ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ကျနော်မှာလည်း Blogspt နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆိုက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် WordPress ကို ပိုပြီး အားသန်တဲ့အတွက် WordPress နဲ့ပဲ ရေးပါတယ်။ WordPress ကလည်း ထိပ်တန်း Free Blog Service ပေးတာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒီ မန်းဂဇက် ရွာကြီးတောင် WP ကို သုံးထားတာပဲ။ (သဂျီးကို အဖော်ညှိပါသည်။ … :kwi: )
WordPress နဲ့ Blogger
ဟိုပွား ဒီပွားနဲ့ လျောက်ပြီး ပွားနေတာ နည်းနည်း များသွားပြီ။ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ လောက အောင်မြင် တိုးတက်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုခြွေရင်းနဲ့ပဲ ဒီပို့စ်ကို ကလနားသတ်လိုက်ပါသည် ခင်ဗျာ။
Source : http://mandalaygazette.com/152980/computers-technology
Post by – မဟာရာဇာ အံစာတုံး
This entry was posted in Blog and tagged မြန်မာ blogger. Bookmark the permalink.
← ပန်းချီတော် ဆရာချုံ	ခေတ်သစ် လူမှုကွန်ရက်များ၊ အကောင်းလား၊ အဆိုးလား →